Chitoro cheRussia Apple chichava nedhipatimendi kugadzirisa iPhone | IPhone nhau
Semutemo wenguva dzose uye pese patinenge tiine dambudziko nechishandiso chedu uye pese painenge iri pasi pevimbiso, tinoenda kuApp Store iri padyo kuedza kugadzirisa dambudziko. Asi kana isu tiine chiitiko chisina kuvharwa newarandi, sekuparara kwechidzitiro, isu tine mukana wekuenda kuApp Store iri padyo kana kuenda kuchitoro, kune mazhinji aripo mumusika, anotibvumidza kutsiva. Kana paine chero munhu anga aine chero mibvunzo nezve mitengo, kubva pane zvakaitika kwandiri ne iPhone 6 Plus, ndinogona kukuvimbisa izvozvoMutengo wechitoro cherudzi urwu neuya weApple Chitoro wakaenzana, saka hazvina basa kuyedza kugadzirisa dambudziko kure neApple Chitoro.
Sekureva kwechinyorwa The Moscow Times, Apple inotarisira kupa system yekugadzirisa michina munyika, mushure mematare nemugari, kukupomera mhosva yekusapa rutsigiro rwakakwana rwezvigadzirwa zvako munyika. Dimitry Petrov, akamhan'arira iyo Cupertino-yakavakirwa kambani gore rapfuura paakaenda kuApple Chitoro kwaakange atenga yake iPhone kuti skrini pachigadzirwa chake ichinjwe. Asi akasangana nekuramba kwechitoro icho chakakurudzirawo kuti aende kuchitoro chechitatu-bato kwavanogona kugadzirisa dambudziko nechiratidziri.
Sezvo zvinosuruvarisa sezvazvinogona kuratidzika, Apple haina parizvino kupa chinovhara chinotsiva sevhisi, inodhura kwazvo uye yakaoma maitiro nekuda kwemuchina unodikanwa kuti uzokwanisa kuzviita mumamiriro akanaka. Kunyangwe mutongi asati atura nezvenyaya iyi, Apple iri kugadzirira Apple Stores kudzivirira nyaya dzeramangwana dzakaita seyaDimitri kuitira kupa rutsigiro rwakakwana kuvashandisi munyika. Parizvino, kana vashandisi vaine dambudziko nemidziyo yavo, vanotsiviwa neimwe pasina matambudziko, asi kana zvichidikanwa kugadzirisa zvinokuvadza zvisina kufukidzwa nazvo, kambani inoedza kuifuratira zvachose, ichipa mufananidzo wakashata kwazvo munyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Russian Apple Stores ichave nedhipatimendi kugadzirisa iPhone